Yekupedzisira Gwara Rekutenga Wiricheya Muna 2021 | Karman® Mawiricheya
Paunenge uchitenga wiricheya, wzvitsitsinho vashandisi havanzwe vakasungwa.
Chii chakakosha pakutenga wiricheya? Mumwe munhu ane hurema anogona kufamba-famba nekukurumidza mukati wiricheya sezvinoita mumwe munhu nokufamba. hwiricheya inopa vanhu mukana wekushanda kana kutenga kana kuita mamwe mabasa kunze kwemba yavo.
Mune dzimwe nzira, a wiricheya yakafanana nebhasikoro. Iyo inouya mune akasiyana magadzirirwo pamwe nezvitaera zvekusarudza kubva, kusanganisira magetsi, mhando dzemagetsi, vadzokere, bariatric, ergonomic, Etc.
Nesarudzo dzakawanda kwazvo dzinowanikwa mumusika, kusarudza kurudyi wiricheya, kunyanya kekutanga-nguva wiricheya mushandisi, inogona kuvhiringidza.
Kana iyo fit isiriyo, mushandisi haakwanise kuwana kugadzikana uye haazokwanise kuita rakanyanya basa kunze kwayo.
Ungasarudza Sei hwiricheya?
Naizvozvo, inogara iri zano rakakura kubvunza anoshanda (OT) ane ruzivo rwakakwana nemhando dzinoverengeka dze mavhiripu.
Uku kwekupedzisira wiricheya kutenga gwara re2021 inopa nzwisiso mune iyo hwiricheya nzira yekutenga, pamwe nekusimbisa inonyanya kufarirwa hwiricheya mhando uye maitiro ekufunga kuti ndeapi wiricheya ndiyo yakakodzera iwe.
Best Mawiricheya Kutenga Nhungamiro 2020
Pakusarudza a hwiricheya, pane zvakawanda zvinhu zvekufunga nezvazvo, semuenzaniso, nzira yekufambisa, hwiricheya mhando, mashandiro ekudzora, uye mazhinji zvakakosha, hunyanzvi hwashandiswa.
Wheelchair Propulsion Maitiro
Kunyanya pane maviri mhando yeprulsion michina, uye ndeaya:
Izvi ndizvo akaita nemavhiri mahombe ekumashure, ma casters epamberi pamwe ne marimu emaoko. Varwere vanozvishandisa kufamba pasina chero rubatsiro. Mavhiri makuru ekumashure anoita kuti zvive nyore kufamba pamusoro pouswa kana dzimwe nzvimbo dzakaomarara.
Uye zvakare, kusiyana neIye-Yega-Propel Mawiricheya, aya ane mavhiri madiki, uye anovimba nemushandisi ari kusundwa kutenderedza nerubatsiro.
Iwo anoshandiswa muNursing Homes, Hospitals pamwe neAirlines.
Kurema kwavo, pamwe nekuvapo kwe 'Attendant Brakes', zvinobvumira muchengeti kufambisa wiricheya nyore pasi pemakomo anomhanya kana kukiya kuitira kuchengetedzeka pazvinenge zvichidiwa.
hwiricheya Mhando & Kurema
Kurema ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuti utarise kana uchitenga a hwiricheya.
Iyo ine yakanangana nekukanganisa pa kutakura cheya nekusimudza kwakachengeteka.
Aya anorema angangoita makumi maviri nemakumi mana nemakumi mana emakumi mana uye anowanikwa mune zvese kuzvifambisa pamwe nemhando dzekufambisa dzekushandisa.
Izvi ndizvo priced mune zvehupfumi kutenderana nemabhajeti ese.
Aya akareruka huremu, akatenderedza 13 kusvika 29lbs, uye zviri nyore kufamba.
Izvo zvinowanikwawo mune zvese kuzvifambisa pamwe nemhando dzekufambisa.
Uyezve, izvi zvakagadzirirwa vashandisi veBariatric, izvi mavhiripu zvakagadzirwa nesimbi dzakasimba simbi, uye dzinorema kutenderedza 30 kusvika 65lbs.
Heavy Duty mavhiripu:
Izvi zvinogona kuchinja maitiro emurwere mu wiricheya uye uvabvumire kurara kumusana kwavo.
Izvo zvakagadzirwa nenzira yekuchengetedza akasiyana mafambiro uye kune kudzivirira blisters, rubatsiro mukutungamira kwekuzvinyima uku uchiwedzera kushivirira kwekugara.
Nzira Yokusarudza Nayo Saizi Yakakodzera ye hwiricheya?
Uyezve, kusarudza saizi yakakodzera mawiricheya anotamba iro rakakosha basa mune zvese nyaradzo pamwe nekusimudzira bio-michina yeiyo hwiricheya.
Uye zvakare, pane zvinhu zvakasiyana zvekufunga nezvazvo, seSeat upamhi, Kudzika, kukwirira, Backrest, uye armrest.
Kukanganisa kwechigaro Upamhi hwe hwiricheya
Hupamhi hwechigaro che wiricheya zvinokanganisa nyaradzo pamwe nekuita kweiyo hwiricheya.
Hupamhi hwechigaro hunofanirwa kunge hwakafara zvakakwana kusvika kupa zvakakodzera kugovera uremu.
Inofanirwawo kuve yakamanikana zvakakwana kubvumira iko nyore kubata kwako hwiricheya.
Uye zvakare, kana chigaro che wiricheya iri yakafara kwazvo, ipapo inotungamira kune isina kubvunzwa shanduko yechinzvimbo uye kusamira zvakanaka.
Izvi zvinoita kuti zvive zvakaoma kuwana mavhiri ayo pakupedzisira anowedzera mukana wekuwana kuipa.
Uyezve, kana chigaro che hwiricheya yakamanikana zvakanyanya, ichave isina kudzikama pamwe nekusagadzikana kugadzikana.
Chigaro Kudzika Kukosha kweiyo hwiricheya
Chigaro Kudzika kweiyo hwiricheya zvakangofanana zvakakosha sehupamhi hwenyaradzo pamwe nebiomechanics yeiyo wiricheya. Usakanganwa izvi kana uchitenga hwiricheya.
Kana chigaro chikapfupika, chinozopedzisira charemerwa matako uye zvinobva zvawedzera njodzi dzekuchengetedza, izvo zvinokanganisa maneuverability nekuisa huremu hwakawandisa pane makasitoma.
Zvichienderana, kana chigaro chakanyanyisa kudzika, chichaisa kumanikidza kumashure kwemabvi, izvo zvinozotungamira kune yakatsiga mamiriro, uye izvo zvinogona kukanganisa kuchengetedzwa kwekumanikidza pamwe nekufambisa kweiyo hwiricheya.
Kukanganisa kweGumbo Kureba kwe hwiricheya
The hwiricheyaKureba kwemakumbo kwe wiricheya inosimbisa kukwirira kwakaringana kwetsoka dzetsoka, dzinozorega chikamu chemuviri wemuviri chikatorwa netsoka.
Chigaro Kureba Kukosha kweiyo hwiricheya
Iyo chigaro chinofanirwa kuve chakakwira zvakakwana kuti ubvise huremu kubva patsoka dzemushandisi, asi panguva imwechete zvakare yakadzika zvakakwana kuti ikwane pasi petafura zvakanaka.
Paunenge uchifunga nezveSeight Kureba iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve kukwirira kwemakusheni iwe uchave iwe kushandisa.
Kukosha kweKukwirira kwe hwiricheya Kudzoka shure
Kureba kwekuseri kunoenderana nedhigiri re kuremara.
Sezvineiwo, backrest iyo inopa zvakakodzera kusagadzikana kwenzvimbo yakagara zvakanaka uye zvakare inopa rusununguko yekufamba isarudzo yakanaka.
Kune vanhu vane postural zvinonetsa, yakakwira backrest ne kuwedzera kugadzikana inogona kukodzera.
Ipo, kunevashandisi vanotsvaga yekuwedzera ruoko rusununguko, yakaderera backrest ndiyo yakanaka sarudzo.
Kureba kweArmrest: Iwe unofanirwa kugona kuzorora maoko ako zvakanaka.
Kureba Kwetsoka: Haifanire kuwedzera kure zvakanyanya kuti ive chipingamupinyi.
Yedu Akakurumbira Models yekutenga hwiricheya
Heano mamwe Ekutengesa Kwedu Kwakanyanya mavhiripu:
Kufambisa Go Simba Wiricheya
The Tranzit Go yakave yakafuridzirwa neimwe isina kureruka mavhiripu mumusika. Chaizvoizvo, iri nyore kupetwa pamwe nekutakurika.
Yakagadzirirwa kuti kuvandudza hupenyu hwe vanoshandisa wiricheya pasi rose. Icho chimwe cheyakareruka uremu kupeta simba mavhiripu, inorema chete 56 lbs.
Wiricheya iyi inosimudzira kuzvimiririra pamwe ne kufamba pamwe nekunyaradza. Iyo yakakwana kune ese ekunze pamwe nekufamba mukati.
Pros: ● Nyore kushandisa Joystick ● Kupeta uye Lightweight furemu
Cons: ● Haikodzeri nzvimbo dzese
T-2017 & T-2019 - 26 makirogiramu
Iyo T-2000 Series na Karman Healthcare yakagadzirirwa neVelcro mount gumbo tambo pamwe neakagadzika akazara-akareba mawrestrests. Uyezve, iri lightweight, compact chokufambisa wiricheya ine furu iri nyore kupetwa ye kufamba nyore pamwe nekuchengetedza. Inorema chete 23 lbs pamwe chete nerestrestrest.
Zvakare, iyo inofema porous nylon upholstery ndeye yepamusoro-giredhi, murazvo unodzora, uye zvakare nyore kuchenesa. Izvi transport chair inopa zvigaro zvehupamhi zvigaro, uye ine huremu huremu hwe250 lbs.
S-305 Ergonomic Wiricheya
Karman S-Ergo 305 wiricheya inopa hunorumbidzwa hunhu pamakwikwi anokwikwidza zvakanyanya kupfuura vamwe vari mumusika.
Kurema kweiyo hwiricheya ingori 29 lbs, uye ine 250-lb huremu huremu. Izvi wiricheya inouya mu16 ″ pamwe ne18 ″ zvigaro upamhi.
Yakagadzirirwa zvinhu senge mavhiri epakarepo anoburitswa pamwe nechigadziko chemaoko.
With the S-305 iwe unowana mukana kune zvakapusa uye kiyi zvinogadziriswa sarudzo.
At Karman Utano tinotenda kuti hapana saizi imwe inokwana zvese mavhiripu, uye zvinoenderana nemamiriro ezvinhu epamoyo pamwe nezvinodiwa nevashandisi.
Nekudaro, kuve nekunzwa wakasununguka kutaura nesu kana iwe inoda chero rubatsiro nekusarudza hwiricheya, uye vashandi vedu vanobatsira vachadzokera kwamuri nemazano akakodzera.
Yedu 2021 mubairo wegore weakanakisa vhidhiyo pa hwiricheya chidimbu gwara rinoenda kuna Ken @ Kuruboshwe Makumbo Warrior
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, asingaremi mawiricheya, kufamba, famba, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu.